ပင်တေကုတ္တေပွဲ - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2019-02 > ပင်တေကုတ္တေ
Jesus sagte den Jüngern, kurz vor seinem Tod, dass sie den Heiligen Geist, den Beistand und Tröster erhalten werden. "Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit" (2. တိမောသေ 1,7). Dies ist der verheissene Heilige Geist, die Kraft aus der Höhe, die der Vater am Pfingsttag gesandt hat.
ထိုနေ့တွင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တမန်တော်ပေတရုအားဟောပြောခဲ့သမျှတွင်တန်ခိုးအရှိဆုံးသောတရားဟောချက်တစ်ခုကိုပေးခဲ့သည်။ သူသည်မဖြောင့်မတ်သူများလက်ဖြင့်ကားတိုင်တင်သတ်ပြီးသတ်ဖြတ်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲပြောဆိုခဲ့သည်။ ဤအရာသည်သူသေခြင်းမှထမြောက်စေသကဲ့သို့ကမ္ဘာကိုမတည်ထောင်မီဘုရားသခင်က၎င်းကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်လကျော်ကပင်ထိုတမန်တော်သည်အလွန်စိတ်သောကရောက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကျကာယေရှုကိုသုံးကြိမ်တိုင်ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
Jesus Christus vollbrachte gewaltige Wunder, indem er Tote auferweckte, Kranke heilte, Blinden das Sehvermögen gab und Taube wieder hören lies. Können wir verstehen, dass es derselbe Heilige Geist ist, den Gott uns gegeben hat, der uns zu einem Körper getauft hat und uns dazu brachte, denselben Geist zu trinken? "Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt" (1. ကောရိန္သု ၁2,13).
သင်၏အသိဥာဏ်သည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ဘုရားသခင်သည်သင်၏တန်ခိုးကြီးသောသန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ကိုသင့်အားသခင်ယေရှုခရစ်နှင့်သင်၏ဘုရားသခင်၊ သင်၏သခင်နှင့်သခင်၏လမ်းခရီးတော်၌လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်သင်အားပေးသည်။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့၎င်း၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်ကိုပေးတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်အသစ်သောအသစ်သောအရာဖြစ်သည်။
Natu Moti ကပြုလုပ်သည်